ကမ္ဘာ့ဖလားကာ​လ​​ အ​တွင်း​ ​မု​ဒိမ်း​ကျင့်​​ ခံ​ရ​ခြင်း​မှ​ ​ကာ​ကွယ်​ရန် ​အ​မျိုး​သ​မီး​သုံး​​ ကွန်​ဒုံး​ ​ဖြန့်​ဝေ’ | နတ်သမီး အလွမ်း
Visit: mlstories.wordpress.com …လာရောက်သူအာလုံးကျေးဇူးတင်ပါသည်.
* Blogs Link Page
* Htoo Wah..Karen song
* Myanmar Blog
* Myo Gyi
* selection song
← Miss World Cup 2010 ပြိုင်ပွဲ အာဂျင်တီးနား အလှမယ် ဆုရ
ကမ္ဘ.ာအမြင့်ဆုံး ရုပ်တုများ’ →
ကမ္ဘာ့ဖလားကာ​လ​​ အ​တွင်း​ ​မု​ဒိမ်း​ကျင့်​​ ခံ​ရ​ခြင်း​မှ​ ​ကာ​ကွယ်​ရန် ​အ​မျိုး​သ​မီး​သုံး​​ ကွန်​ဒုံး​ ​ဖြန့်​ဝေ’
တောင်အာဖရိက နိုင်ငံမှ ဆရာဝန် တစ်ဦးသည် ကမ္ဘာ့ဖလား ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ ကျင်းပ နေစဉ် အတွင်း အမျိုးသမီးထု အကြမ်းဖက် မုဒိမ်း ကျင့်ခံရခြင်းမှ ကင်းဝေးစေရန် ရည်ရွယ် ထုတ်လုပ် ထားသည့်
ကွန်ဒုံး တစ်မျိုးအား အခမဲ့ ဖြန့်ဝေ ပေးသွား မည်ဟု သိရသည်။
ဒေါက်တာ ဆွန်းနက်အီလာက သူမ ကိုယ်တိုင် တီထွင် ထားသည့် အမျိုးသမီးသုံး ကွန်ဒုံးကို Rape-aXe​ ဟု အမည် ပေးထားကြောင်း ပြောကြား ခဲ့သည်။ အဆိုပါ ကွန်ဒုံးတွင် အလွန် သေးငယ်သော
ချိတ်ကလေးများ ပါဝင်ပြီး အမျိုးသမီး၏ လိင်အင်္ဂါ အတွင်း ထည့်သွင်း တပ်ဆင်ထားပါက အကြမ်းဖက် မုဒိမ်းကျင့်သူ အမျိုးသား၏ လိင်တံတွင် တွယ်ငြိ ကပ်ပါသွားမည် ဖြစ်သည်။ ထိုထောင်ချောက်ဆင် ကွန်ဒုံးအား ဆေးရုံတွင်သာ ဖယ်ရှားနိုင်မည်ဟု ဒေါက်တာ ဆွန်းနက်ကဆိုသည်။ ထို့ကြောင့်လည်း ဆေးရုံမှ ဆရာဝန်များသည် အဆိုပါ ပုဂ္ဂိုလ်မှာ မုဒိမ်းမှု ကျူးလွန် လာကြောင်း ချက်ချင်း
ဖော်ထုတ် လိုက်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။
ယခင်က အလားတူ ထောင်ချောက် ကွန်ဒုံးမျိုး တီထွင်ဖူးသော်လည်း Rape-aXe တွင် ပါဝင်သည့် ချိတ်များမှာ ပိုမို သေးငယ်ပြီး တိုက်ခိုက် ပြုကျင့်သူ၏ လိင်အင်္ဂါ အရေပြားကို မပေါက်ပြဲ
စေသောကြောင့် HIV ပိုး ကူးစက်မှုကို ကာကွယ် နိုင်မည်ဟု သိရသည်။ သို့သော်လည်းRape-aXe နှင့် ပတ်သက်ပြီး ဝေဖန်မှုများ ရှိနေသလို အမျိုးသမီး အခွင့်အရေး ကာကွယ်ရေး အဖွဲ့များက ယင်း ကွန်ဒုံးသည် အမျိုးသမီးများ အတွက် အမှန်တကယ် အကာအကွယ် မပေးနိုင်သည့် အပြင် လိင် အကြမ်းဖက်သမားအား စိတ်ဆိုးအောင် ဆွပေးရာရောက်သဖြင့် ပိုမိုအန္တရာယ် ကြီးနိုင်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ထို့အပြင် အချို့သော အမျိုးသမီးများသည် ရိုးရိုး သားသား ငွေကြေး ပေးကမ်းပြီး အပျော်အပါး
လိုက်စားသည့် အမျိုးသားများအား ထောင်ဖမ်းသည့် လက်နက် တစ်ခု ဖြစ်လာ နိုင်ကြောင်း ထောက်ပြ ခဲ့သည်။ တောင်အာဖရိက နိုင်ငံသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် မုဒိမ်းမှု အထူပြောဆုံး နိုင်ငံ တစ်ခုဖြစ်ပြီး နိုင်ငံ အတွင်းရှိ အမျိုးသမီး(၄) ဦးတွင် (၁)ဦးတိုင်း မုဒိမ်း ကျင့်ခံဖူးကြောင်း ဝန်ခံ ထားသည်။
Posted by chitmusic on June 12, 2010 in Uncategorized
ကျန်းမာရေး သုတ (7)
သယ်ယူပို့ ဆောင်ရေး (2)
Radio နားဆင်ရန် (1)
Website အညွန်း (2)
ပို့ စ် အသစ်
၂၀၁၁ အတွက် အခမဲ့ အသုံးပြုနိုင်မည့် ထိပ်တန်း Antivirus ငါးမျိုး
International Free Call with Tuitalk
၀င်းဒိုးXPမြင်ကွင်းကို ၀င်းဒိုး7 မြင်ကွင်းပြောင်းလဲသောဆောစ့်ဝဲလ်
ယခင် ပို့ စ်များ
ယခင် ပို့ စ်များ Select Month May 2011 (9) February 2011 (7) August 2010 (19) June 2010 (38) May 2010 (69) April 2010 (2)
Wee Nyin thit
မြန်မာ Cracking Team
မြန်မာ IT Develpoment
မြန်မာ IT Professionals
မြန်ာမာ IT တိုးတက်ရေး
Day Light အွန်လိုင်း
Myanamr IT Development
စုံလင်တဲ့ Free Software ဆိုဒ်
Drive Manual (NYS)
Visiion of Humanity
Learning English IN 365 lesson
Practice with Robot F
Myanmar Mp 3
saing Dictionary( EM)
မို့ မို့ 
down what U Need!
free wordpress themmes
Cyber Net Link
Learn Idioms In English
Download soft 82